नेपाली चेली मनिषा कोईराला राजनीतिमा आउने चर्चा, राजनीतिमा आउनु सहि कि गलत ? – PathivaraOnline
Home > समाचार > नेपाली चेली मनिषा कोईराला राजनीतिमा आउने चर्चा, राजनीतिमा आउनु सहि कि गलत ?
भारतमा रहेकी लोकप्रिय अभिनेत्री मनिषा कोईराला मंगलबार बेलुकी बेलहिया नाकाबाट नेपाल भित्रिए लगत्तै के उनी राजनीतिमा प्रवेश गर्लिन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
आफ्नो श्रीमानलाई छोडेर फेसबुकमा लव परेको केटासँग भाग्दा मुम्बईमा बेचिन पुगिन्!
मन्त्री अधिकारीसहित सातै जनाको शव काठमाडौंमा, यसरि टुक्रा टुक्रा अवस्थामा शव – मुटु दरो पारेर तस्विर हेर्नुहोस